Kourtney Kardashian wuxuu go'aansaday inuu ka noqdo - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Kourtney Kardashian wuxuu go’aansaday inuu ka soo dhex baxo dadkii badnaa
Kourtney Kardashian wuxuu go’aansaday inuu ka soo dhex baxo dadkii badnaa
Go'aankeedii ayey gaadhay. Tan iyo dhowr marxaladood oo Kacbada Kardashians, Kourtney Kardashian silsilado Gorgortanka walaashiis, Kim et Khloe, oo ay sheegtay in aysan mar dambe la wadaagin damaca joogtada ah ee ah in si joogto ah loo hoos dhigo iftiinka. Dhawr jeer oo horeba, hooyada sanadaha 40 waxay ka baxday rabitaankeeda ah inay ka tagto bandhigga dhabta ah. Iyo wareysi lala yeeshay Entertainment CaawaKhamiista, Nofeembar 7, waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay ka baxeyso bandhiga in muddo ah.
Waxaan go aansaday inaan waqti dheeri ah ku yeesho sidii hooyo oo aan xoog badan u geliyo. Laakiin maahan nabad gelyo, ayay tidhi. Hooyo seddex carruur ah, Mason, 9 sano, Penelope 7 sano, iyo Isbedel, 5 sano, Kourtney Kardashian sidaa darteed wuxuu go’aansaday inuu diiradda saaro qabiilkiisa yar halkii uu ka eegi lahaa maqaamkiisa haweenay ganacsato ah. Gaar ahaan tan iyo dhowr bilood, waxay sidoo kale haysaa bogagga ladnaanta Poosh, halkaas oo ay kula wadaagaan talooyinkeeda ku saabsan quruxda, caafimaadka iyo moodada.
Bandhig cusub oo aan Kourtney lahayn?
Si kastaba ha noqotee, haddii Kourtney Kardashian go'aansaday inuu si xaqiiqo ah uga tago Kacbada Kardashians, Kim iyada, waxay soo bandhigtay bandhig cusub, oo xuddun u ah iyada oo leh walaasheeda ka yar Khloe. "Naxariis, kaliya Kim iyo Khloe ayaa qaadaya ... Calabasas. Waxay noqon laheyd wax weyn. Waxaan ula guuri karnaa guri caruurteena oo dhan oo aan aragno sida ay wax u socdaan ", sidaa darteed waxay soo jeedisay haweeneyda Kanye West. Si kastaba ha noqotee, curadka qoyska Kardashian ma ahan kii ugu horreeyay ee ka xishoodaan bandhigga xaqiiqda ee orodka qoyska. Runtii, Rob Kardashian hadda diidan yahay inuu dib ugu soo laabto shaashadda in kasta oo miisaan lumis ah, halka Kendall iyo Kylie Jenner xooga saar xirfadahooda kala duwan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/kourtney-kardashian-decide-de-se-mettre-en-retrait-de-l-emission-de-tele-realite-1046887
Cabsida caafimaad ee 'camilla health': cabirka NHS-ta ee ku saabsan cudurada ku dhaca nolosha ee nafta halis geliya
Amiir William wuxuu siinayaa & # 039; ganacsiga & # 039; ka jawaab Olivia Coleman su'aasha ku saabsan The Crown